Ugu sareysa shan goobood oo ay u soo bixi heesaha raabka ee online
Music rap waa qayb weyn oo ka mid ah music hip hop ah waxaa inta badan loo isticmaalaa markii uu garaaca music rap caadiga ah ayaa gabay ku hadlay. Haddaba, asalka music rap waxaa laga helay inta lagu guda jiro qarniyo hip hop, waxa uu ahaa mid aad u music caanka ah caruurta iyo dhallinyarada ka mid ah. Qaar ka mid ah kufsaday caanka ah laga heli karaa siiyey hit songs waa Eminem, akon iyo nimankii gabayaaga kale oo badan oo caan ah. Music rap lagu qasi doonaa music dalka in la siiyo dad isuga yimid oo runtii aad song u qurux badan oo soo celin nooc cusub. Music rap waxaa lagu samayn karaa si fudud oo isticmaalaya cod ah oo gitaarka; waa gabay ku hadlay cajiib ah.
1.Mp3.com waa goobta ugu wanaagsan ee music rap downloads halkan ka fanaaniinta asalka geliyaan doonaa, shuqulladooda iyo taageere ka mid ah fanaaniinta kuwa si fudud soo bixi kartaa. Goobta ayaa hormartay shaqeynayaan raadinta oo waxay naga caawinaysaa in ay kala heesaha oo ku salaysan fanaaniinta iyo waqtiga. Dadka guraan karaa music ah sida ay ku sifayn jecel.
Mp3.com waa website asal ah oo haysata gabayadii dhan fanaaniinta halkaas heesaha oo dhan waa la uploaded by fanaaniinta mid ah. Bogga internetka ee ogolaanaya taageerayaasha si ay u soo bixi heeso ay artist jecel yahay ee si fudud, dadka ka dhigi kara isticmaalka raadinta sare halkan qaybta, iyo ku sifayn iyo raadinta Horeeyaan waxaa la samayn karaa si fudud. Waxaan muuqan isticmaali kartaa heesaha oo ku sifayn xigmad leh iyagoo isticmaalaya wakhtiga ay tani waxay ka caawisaa si ay u helaan heesaha fudud oo dhakhso ah.
2.Incompetecth waa goob ugu fiican inaad kala soo baxdo heesaha oo dhan oo heesaha raabka; halkan waxaan ku soo bixi kartaa music xorta ah u soo bandhigay videos Youtube. Dhammaan music ah waxaa loogu talagalay dadka u baahan ganacsi u soo bixi kartaa oo isticmaal mid ka mid ah videos ama bandhigyo.
Incompetech waa website boqortooyada kaas oo bixiya songs u videos tube aannu idiin, heesaha oo aan copywriter si aan u isticmaali kartaa in our filim, bandhigyo iyo wax kasta oo ganacsiga videos. Goobta waa mid wax tar leh oo dadka oo dhan kuwaas oo doonaya heeso ay mashruuca laakiin lacagta ruqsad ma aha mid la awoodi karo ee. Goobta waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee dejiyeyaasha badan film gaysashada aan heysan lacag. Laakiin dadka ay ku soo bixi heeso ka dib markii akhriska tilmaamaha si taxadar leh in website-ka. By og dhammaan shuruudaha iyo xaaladaha ay tahay in aan u isticmaalno songs ee Mashruuca.
3.Madeloud.com waa user goobta saaxiibtinimo oo uu leeyahay heeso si toos ah uploaded by fanaaniinta asalka ah, dadka doonaya in ay taageeraan fanaaniinta kasta oo shaqsi dooran kartaa this site oo sidoo kale ay shatiga karaa music ah mashaariicda ay si shakhsi.
Makeloud.com waa goob ugu fiican inaad kala soo baxdo songs naga artist jecel ee goobta leedahay in ka badan codadka heesaha kuwaas oo ka qaybaha iyo qaybaha kala duwan. Dadka karaa download song isticmaalaya habab baadhi sare oo inta badan heesaha oo ku sugan goobta ayaa la uploaded by fannaaniin caan ah. Sidaa daraaddeed ayaa dadku ku jira laxamiistaha ah oo doonaya in ay taageeraan wax kasta oo ay jecel yihiin ka dhigi kara isticmaalka goobta. Makeloud.com wuxuu kuu ogol yahay in user shatiga heeso ay si fudud si ay heesaha oo aan la isticmaali doona mid ka mid ah.
4.Publicdomain4u.com leedahay maktabad cajiib ah oo heeso cusub oo dhan kuwaas oo ka kooban by fannaaniin caan ah. Goobta uu leeyahay isku darka ah heesaha oo gaaray leh muuqaal ah taariikheed waxa ay leedahay heeso badan oo daaweyn taas oo ugu caddayn doona user kan booqanaya website-ka. Halkan waxaan ku raaxaysan kartaa cajalado mid ah fanaaniinta caanka ah sida fanaaniinta Joe Williams iyo Cajun weyn.
Publicdomain4u.com waa goob lacag la'aan ah taas oo uu leeyahay maktabad weyn oo heesaha raabka goobta uu leeyahay cajalado cajiib ah music taariikheed raabka. Goobta uu leeyahay isku daraa gabayadii aragti taariikhiga ah gabayo daaweynba in ay sameeyaan dad isuga yimid. Goobta uu leeyahay bedeley mid aad ugu yar kuwaas oo kaa caawin user si ay u sahamiyaan cajalado iyo sidoo kale inay wax ka bartaan ku composers music sida weyn Joe Williams, Cajun, Joe iyo iwm goobta uu yahay mid aad caan u ah heesaha raabka jir ah oo inta badan soo booqday in la ogaado oo ku saabsan music taariikhiga ah ee America. Goobta uu leeyahay raadinta cajiib ah madaxda kaas oo bixiya heeso tiro lacag la'aan ah.
5.Bumpfoot.com la soo bandhigay intii lagu jiray 2005 waxaa u ogolaataa dadka inay download song hal ama track oo dhan, goobta aan haysan ciyaaryahan kasta hooyo si aan u baahan tahay inaad kala soo baxdo si aad u dhegaysato heesta. The keegag heesaha laga heli karaa bump200 halkan Dufcaddii oo dhan ama heeso Solo waxaa lagala soo bixi karaa labaad hal. Waa goob Japan kaas oo u ogolaanaya user ay u koobiyeyn, share iyo qaybiyo heesaha oo sida naga doonayo. Goobta uu leeyahay database ugu weyn oo qabaneysa codadka badan ee songs waxa ku jira.
Bumpfoot.com waxa uu leeyahay isuga ka mid ah heesaha taas oo inta badan waa ka degey technofest, daarmayaay'e, qoob ka ciyaarka iyo iwm goobta aan haysan ciyaaryahan u dhagaysto songs, laakiin dadka soo bixi kartaa cajiib ah raabka video songs website-ka. Heesahaas ayaa ka soo bixi karaa sida Xildhibaanada hal fayl ama aan ka soo bixi kartaa bogga internetka ee track oo dhan. Waxaa jira dad badan oo heeso isku dar ku sugan bump200 category songs this lagala soo bixi karaa qaab Solo ama Dufcaddii oo dhan lagala soo bixi karaa waqti. Waxaa goobta Japan ah oo uu leeyahay buugga cajiib ah oo heesaha iyo waxaa gaar ahaan loogu talagalay dadka daryeela ku saabsan qaybaha iyo category. Goobta noo ogolaanaya in ay wadaagaan songs our in wax baraha bulshada ama aan nuqul ka karaa iyo qaybiyo heesaha in saaxiibadeen.
Oo dhan goobaha kor ku leeyihiin faa'iido iyo khasaare mp3.com u badan oo ka yar song video laakiin video heeso aad u yar labadaba. Laakiin ka this site ay soo bixi kartaa music asalka uploaded by fanaaniinta ah. Incompetech waa kaliya ee ku caashaqay ganacsi oo heesaha raabka iyo heesaha oo loo isticmaali karaa mid ka mid ah mashaariicda ay. Publicdomain4u.com waa u gabayadii taariikheed rap, makeloud.com waa u fanaaniinta heesaha asalka iyo bumpfoot.com ah waxaa loogu talagalay dhammaan noocyo ka mid ah heesaha aan u baahanahay.
> Resource > Music > The Top Five Goobaha si Download Rap Songs Online